Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra sy ny fahasoavany enie homainareo mandrakariva.
Ny hijoroako vavolombelon amintsika androany dia ny nanansitranan'i Jesosy ny rafozako tamin'ny aretina tapaka lalandrà. Izany dia ho vononahitr'Andriamanitra irery.
Tamin'ny faraparan'ny taona 2013, ny 23 Decembre 2013 dia tapaka làlandrà amin'ny loha ny rafozako avy any fianarantsaoa. Nanao ny fombafomba rehetra fotsiny ny dokotera tany dia nasainy nalefa niakatra aty Antananarivo. Vao niala tany Fianarantsoa ry zareo dia efa nitondra am-bavaka ny fianakaviana. Hitantsika ihany moa ny làlala RN7 iny raha ny resaka fanakanan-dàalana sy ny asan-dahalo. Fa nandeha tamim-pitokiana ny Tompo sy am-pinoana no nandehanana tamin'izany. Tonga tamina Barage, dia tsy navelan'ireo mpitandro filaminana handeha fa hoe miandry "caravane", tsy nanaiky izany anefa ny chauffeur izay vinantony ihany fa hoe handeha; dia nilaza ireo hoe: "tsy miantoka izay manjo anareo any izahay." Dia nanaiky ka lasa nandeha ary noho ny fitantanan'ny Tompo dia, tonga soamantsara tanty Antananarivo ihany noho ny tànamaherin'Andriamanitra.
Rehefa izay dia nandeha tamina Clinique teo ankadifotsy no nitondrana azy. Rahefa tonga tao dia nanao ny diagnostique rehetra ny dokotera, novidiana ny fanafody. Marihina moa fa ao dia tsy afaka mitsidika ela loatra ny marary ianao, ary tsy afaka miaraka maro, ny marary anefa dia hita fa tena reraka satria ny lalàndrà amin'ny loha rahateo koa no voa moa. Sady reraka ny voyage teny an-dàlana satria ny làlana lavitra rahateo. Tnga ny ampitso dia namangy indray ny fianakaviana ny 24/12/2013; dia namangy teny indray ny fianakaviana, izay rehetra nitsidika ny marary dia toa somary kivy avokoa satria hita fa tena reraka ny marary ary efa lasa mivalomainty avokoa ny tenany, sady hoatra midelira izany. Nanotania any dokotera dia hoe mila fandidiana maika dia maika izy, ary ny vola holaniana amin'izany dia mitentina 30 million FMG. Nefa ny ireo tokotera ihany koa anefa tsy manome toky fa rehefa vita ny fandidiana dia ho velona ny marary, fa ny hany lazainy dia ny hoe: 90% ny marary toa izao dia maty avokoa eo am-padidiana na efa vita ny fandidiana. Dia samy nisaintsaina avokoa ny rehetra sy nitondra izany teo amin'i Jesosy. Teo no nahazoako valim-bavaka ny hoe tsy fahafatesana no anton'izao fa ny hanehoana ny voninahitr'Andriamantira. Ary teo dia nidongy tamin'i Jesosy amin'izay izay tena sitrapony, satria ny marary efa tena mitaraina fa tena marary, ny vady amanjanany dia efa samy kivy avokoa; satria ny marary dia efa mihamangana sy mihareraka. Ny 24/12/2013. Alin'ny sasankalina io, samy nitolona am-bavaka ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fianakaviana, ary dia nasaina nibebaka avokoa aloha satria ny ankohonany dia mbola tsy tena mifoha avokoa, fa mbola variana ny amin'ny rendrarendran'izao tontolo izao avokoa. Ary rehefa tonga ny 25/12/2013, dia gaga ny rehetra fa hoe hafindra eny amin'ny HOMI eny soavinandriana ny marary. Ka dia samy nifamotoana teny avokoa indray ny fianakaviana rehetra. Vetivety foana dia nahazo efitrano ny marary ary toerana voatokana sy andovam-bola no nomena azy. Teo dia efa nanomboka nisho tsikelikely ny vonianhitr'Andriamanitra. Satria any antrano rehefa mivavaka dia manao asa à distance moa, mandroaka ireo devoly izay mamatopatotra ny fianakaviana indrindra indrindra fa ny devoly aloky ny fahafatesana. Nisy Ray amandreny izay moa dia nanao asa taminy teny amin'ny Hopitaly, satria ny famangiana dia malalaka tsara. Rehefa nandalo indray anefa ireo dokotera teo an-toerana sy ireo professeur, dia samy milaza avokoa fa mila mididy ny marary satria misy rà mivaingana ao amin'ny lohany, ka mila esorina tao. Ary ny vola ilaina amin'izany dia mitovy hatrany amin'ilay teny ny dokotera teny ankadifotsy hoe: 30 Million FMG eo ho eo ihany no vola aloha amin'izany ary tsy mbola manome toky ihany koa ireo hoe ho velona ny marary raha vita ny fandidiana, fa dia mity amin'ny ilay hoe ny 90% ny mararin'ity aretina ity dia maty avokoa. Ka dia nanapakevitra ny fianakaviana fa tsy hodidiana ny marary, ary na ny marary aza dia anisany nadà ny fandidiana ihany koa.
Rehefa nande ny fotoana dia tamin'ny 06/01/2014 aho no sendra nanao Garde malade tao amin'ny Hopitaly, olona telo mianaka izahay no niandry azy tao ary dia nifandimby niandry ny marary. Natao ny vavaka dia izaho aloha no natory voalohany, sady nangataka tolotsaina tamin'i Jesosy ny amin'ilay aretina. Rehefa tonga ny teo amin'ny 10 ora sy sasany alina teo ho eo dia nisolo ny manaraka indray aho. Teo aho no niresaka tamin'i Jesosy ary dia nosaisiko ny Baiboly. Nipetra teo amin'ny seza teo andohafarafan'ny marary aho. dia nojereko tsara ny lohan'ny marary ary teo no nanoroan'i Jesosy ilay toerana misy ny rà miotrika ka mahatonga ny fanaintainan'ny marary, sy mahareraka azy. Rehefa izay dia natao ny asa; noravana ny asan'ny devoly izay mitondra fanaintainana, ny aloky ny fahafatseana; ary noppotehina tamin'ny anara'i Jesosy Kristy avokoa ireo. Ary teo dia hita fa tena nahazo torimaso tsara ny marary ary, tsy nahatsiaro mihitsy aza raha tsy maraina ny andro; izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany; fa talohan'io mantsy izy dia tsy de matory loatra fa midelira sy milaza marary, ary tsy afaka mamadika ny tenany. Voatsindry ny tànany ary teo amin'ilay faritra maharary sy ilay ilany misy lalàndrà tapaka mihitsy. Dia norina tamin'ny anran'i Jesosy ny tànany izay lazainy fa tena voly sy ny lamosiny izay lazainy fa tena reraka be iny. Satria voatsindry nandritry ny alina izy io. Teo dia tena nanomboka nahitana ny fahatsaran'ny marary; efa nanomboka nahapetraka irery, ary ny ampitson'izay ihany aza dia efa nanomboka nianatra nipetraka teo amin'ny sisin'ny fandriana. Ny andro fahatelo manaraka izay dia naobmoka niaka teo amin'ny fandriana, sy nianatra nandeha, ka naka rivotra teo akaikin'ny varavarana. Ny asa dia manaraka eny foana notohizana hatrany ny otra izay natao tamin'ny sady mandroaka ny asan'ny devoly rehetra tamin'ny tenany.
Ny tapaky ny vola Janoary 2014 teo izy no nivoaka ny hopitaly, ary talohan'izay dia nanao scaner aloha, tany ilafy, ary teo no niandrasana ny valin'ny analyse rehetra sy ny scaner. Na ireo dokotera aza dia hita fa somary gaga ihany ny amin'ny fivoaran'ny fahasitranan'ny marary, ary teo ihany koa ny valin'ny scaner izay natao dia tsy hita intsony ilay rà nivaingana tao ami'ny lohany, ary ny lalàndrà izay vaky tao amin'ny lohany dia lasa cicatrice, izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Fa rehefa Izy tokoa ny miasa dia tsy misy mahasakana. Ary rehefa miteny Izy dia tena marina ary mitazona ny teniny. Koa eto aho dia misintona ny saintsika, mety misy olona marary ao aminao; eo ambavahoana ny fahafatesana, na ao anatin'ny aretina mafy. Angataho Jesosy, mamaly antsika araka ny voalaza ao amin'ny Jeremia 33:3. Ilay telephone tsy misy messagerie, na occupée, na tsy misy reseau. Fa mandeha foana 24h/24h izany. Ny zavatra rehetra dia tsy misy tsy hain'Andriamantira atao, fa rehefa manam-pinoana isika dia tanteraka amintsika ny sitrapony araka ny teniny hoe: "Ho tonga aminao araka izay irin'ny fonao".
Ary dia salama tsara tsy manahy izy hatramin'izay ka hatram'izao, na dia mandeha voyage lavitra aza, na manao "controle" dia tsy misy ahiana ny fahasalamany. Ny teny ambarako sy ampaherezako antsika rehetra androany dia ny hoe: "Indro ny tànan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare." Isaia 59:1
Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.